Waa sidee Xaaladda Dhaawacyadii Qadar loo qaaday – Banaadir Times
By banaadir 28th July 2019 137
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qatar Amb. C/risaaq Faarax Cali Taano ayaa sheegay in xaalada Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Eng. Yariisow iyo dhaawacyada kale ay xaaladooda soo hagaageyso marba marka ka dambeysa.
Wareysi uu Safiirka siiyay Telefishinka Universal ayuu ku sheegay in Xaalada Guddoomiyaha ay soo fiicnaaneyso, isla markaana dalka Qatar ay ku filan tahay daaweyntooda iyo baxnaanintooda xaalada dhaawacyada oo aan baahi meel kale oo loo aadi doono aysan jirin.
Waxaa uu sheegay in dhammaan dhaawacyada ay ku jiraan Isbitaalka weyn ee Hamad, si wanaagsan ay dhaqaatiirta ula tacaalayaan, isla markaana ay dhaqaatiirta ay muujinayaanmas’uuliyad weyn oo xilkasnimo leh.
Mar la weydiiyay xaalada dhaawaca ee Guddoomiye Yariisow ayuu sheegay in maalintii la keenayay Doxa iyo hadda ay kala duwan tahay, isla markaana ay marba marka ka dambeysa soo hagaageyso.
“Xaaladiisa aad ayay u soo hagaageysa, markii diyaarada lagu keenayay halkaan Doxa si fiican looma garan karin, hada waa qof neefsanaya oo dhaq dhaqaaq sameynaya wax badan muuqaalkiisa waa soo laabtay, waxaa u yimid xaaskiisa iyo carruurtiisa aad ayay ugu faraxsanaayeen sida loola tacaalayay”ayuu yiri Safiirka.
Ugu dambeyn Safiirka ayaa sheegay in markii la keenay Doxa laga saaray saddex firir oo caloosha ka galay, xaalkiisa uu fiican yahay, balse ay sugayaan jawaabta dhaawaca madaxa inta ay la egtahay oo firir ku jiro, isla markaana dhaqaatiirta ay gelinka dambe ee maanta war ka sugayaan, wixii talo ee ay soo jeediyaan ay arki doonaan.